ရုရှား POST ကိုများအတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်လုပ်နည်း - စာပို့ - 2019
အကောင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းရုရှား Post ကို
မေးလ်ရုရှားကယနေ့ access ကိုသာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်မှတဆင့်ရယူနိုင်သည့်ဖို့အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသည်။ ၎င်း၏မှတ်ပုံတင်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီးမည်သည့်ရှုပ်ထွေးထိန်းသိမ်းရေးမလိုအပ်ပါဘူး။ အောက်ပါညွှန်ကြားချက်မှာတော့ကျွန်တော်တစ်ဦး web site ကိုအဖြစ်, သို့မဟုတ်မိုဘိုင်း app မှတဆင့်ရုရှား LC မေးလ်ထဲမှာမှတ်ပုံတင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစဉ်းစားပါ။
ရုရှား Post ကိုအပေါ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း
သငျသညျဖန်တီးတဲ့အခါသင်အတည်ပြုချက်ကိုလိုအပ်အရေးကြီးသောဒေတာတွေအများကြီးကိုသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ထိုကြောင့်, နှင့်အကောင့်ဖယ်ရှားရေးအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအခွင့်အလမ်းများမရှိခြင်း၏, သတိပြုရကြမည်။ သင်တစ်ဦးဥပဒေရေးရာ entity လျှင်ဒီအထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာရှုထောင့်။ ဤကိစ္စတွင်အဘို့, နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအပိုင်းအတွက်ရုရှား Post ကို၏ website တွင် updated ရပါမည် "အကူအညီ".
Option ကို 1: တရားဝင်က်ဘ်ဆိုက်
ရုရှား Post ကို၏ site ကိုသင့်ကွန်ပျူတာအပိုဆောင်းဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်မလိုဘဲအသစ်တစ်ခု account တစ်ခု register မှအများဆုံးအဆင်ပြေနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်စတင်ရန်, တရားဝင်က်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားဖို့အောက်က link ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံ။
ရုရှား Post ကို၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရန်
ချက်ချင်း link ကိုအပေါ် home page ကိုကလစ်၏အပေါ်ညာဘက်ထောင့်မှာရှိတဲ့ link ကိုပြောင်းပြီးနောက် "ဝင်မည်".
ထိုအခါခွင့်ပြုချက်ပုံစံအောက်, link ကိုနေရာချထားခြင်းနှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "sign up ပြုလုပ်ပါ".
ထောက်ပံ့လယ်ပြင်၌, သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
ထိုအခါကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို"ဒီစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်။
လယ်ပြင်၌ဝင်းဒိုးအသစ် "အကောင်းဆုံးများ၏ကျင့်ထုံး" သင့်ရဲ့သတ်မှတ်ထားသောဖုန်းစာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုအဖြစ်စေလွှတ်တော်မူကြောင်းကိန်းဂဏန်းများအစုတခု print ထုတ်။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်သင်ကုဒ်ယူမှုကိုပြန်လည်သို့မဟုတ်အမှားတွေကိုအောင်၏အမှု၌သူအရေအတွက်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
ယင်းကို SMS ကနေအက္ခရာအစုတခုထည့်သွင်းခြင်း, စာနယ်ဇင်း "Confirm".
အောင်မြင်သောအတည်ပြုချက်ကိုစာမျက်နှာအပျေါမှာ e-mail ကိုအတည်ပြုပေးရန်လိုအပ်ချက်နှင့်အတူပေါ်လာသည်။
, သင့်စာတိုက်ပုံးကိုဖွင့်ဟု post ကိုသွားပြီးအထူးခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ထိုအခါသင်သည်ရုရှား Post ကို၏ site သို့ပြောင်းရွှေ့လျက်, မှတ်ပုံတင်ပြည့်စုံကြောင်းပါလိမ့်မည်။ အနာဂတျမှာ, ခွင့်ပြုချက်ပုံစံများအတွက်ယခင်ကထဲသို့ဝင်ဒေတာကိုသုံးပါ။
မဆိုကိုအီးမေးလ်လိပ်စာ, အမည်နှင့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်အပါအဝင်သတင်းအချက်အလက်, အကောင့် settings ကိုမှတဆင့်လိုချင်သောဖို့အတွက်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဝင်ကြ၏။ သငျသညျရုတ်တရက်သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုမှတ်ပုံတင်ဖို့၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မှားယွင်းစွာထဲသို့ဝင်ထားပြီးလျှင်အချိန်တန်ကဒီရန်, သငျသညျမစိုးရိမ်သင့်ပါတယ်။
Option ကို 2: အဆိုပါမိုဘိုင်း app
ရုရှားမိုဘိုင်း application ကိုမေးလ်မှတ်ပုံတင်ဖို့၏ရှုပ်ထွေးမှုအသုံးအနှုန်းများအတွက်ကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေကွာခြားပါဘူးမှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်သင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းတွင်သင့်အကောင့်ကိုအသုံးဆက်လက်ခွင့်ပြုယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အထူးဆော့ဖ်ဝဲကိုအပြင်ကသင်သည်လည်းအင်တာနက်ဘရောက်ဇာကိုသုံးပါနှင့်ဆောင်းပါး၏ပထမအပိုင်းအတွက်ခြေလှမ်းများပြန်လုပ်ပေးနိုင်သည်။
ရုရှား Post ကို Google Play / App Store မှ app ကို Download လုပ်ပါ
အတူစတင်, မခွဲခြားဘဲပလက်ဖောင်း၏, သင့်လျော်တဲ့ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်တပ်ဆင် application ကို run ။ နှစ်ဦးစလုံးကိစ္စများတွင်၎င်း၏ installation ကိုတာရှည်မယူခဲ့ပါဘူး။
ထို့နောက်ရုရှားက၏ Post ကို run ခြင်းနှင့်အောက်ခြေ toolbar ကိုပေါ်, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပို"။ ပထမဦးဆုံးပြေးစဉ်အတွင်းသင်တိုက်ရိုက်လိုချင်သောပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းနိုင်ပါသည်ရှိရာအဆိုပြုချက်ကိုမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူအထူးအသိပေးကြည့်ပါသင့်တယ်။
လာမယ့်စာမျက်နှာတွင်, select လုပ်ပါ "မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ရဲ့ login".
link ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "sign up ပြုလုပ်ပါ"အကျိုးခံစားခွင့်အကောင့်များ၏စာရင်းအောက်တွင်တည်ရှိသည်။
ထိုအခါ button ကိုနှိပ် "Continue".
ဖုန်းနံပါတ်အပေါ်လက်ခံရရှိ SMS စာတို၏, ထိုလယ်၌ကိန်းဂဏန်းများအစုတခုထည့်သွင်း "ဟုအဆိုပါ SMS ကို၏ code ကို" နှင့်စာနယ်ဇင်း "Confirm"။ သငျသညျချင်လျှင်, သင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုအသစ်မိတ္တူအမိန့်သို့မဟုတ်အရေအတွက်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့စာတိုက်ပုံးတစ်ခုကို SMS ပေးပို့ခြင်းနေစဉ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ သင့်ရဲ့ဖုန်း၏အောင်မြင်သောစိစစ်အတည်ပြုပြီးနောက်, မက်ဆေ့ခ်ျကိုသွားပြီးအထူး link ကိုအသုံးပြုပါ။ ဤအရည်ရွယ်ချက်များ, သင် e-mail, applications များ, မိုဘိုင်းဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာများ၏အကူအညီပေးနိုင်သည်။
ထောက်ပံ့အတည်ပြုချက်ကိုစာမျက်နှာ, မိုဘိုင်း app များနှင့်လယ်ပြင်၌ပြန်သွား, အကောင့်များအတွက်ဆန္ဒရှိ password ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
ဒီဆောင်းပါးနိဂုံးခြုပျမြားနှငျ့က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်နှင့်ရုရှား Post ကို၏နောက်ဆက်တွဲအတွက်အကောင့်သစ်၏မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူသငျသညျအကောင်းကံအလိုရှိ၏။
သငျသညျမှတျပုံတငျနှစ်ဦးစလုံးကိစ္စများတွင်, သင်အဲဒါကို Windows ကိုအန်းဒရွိုက်-powered ကိရိယာသို့မဟုတ်ကွန်ပြူတာရဲ့ရှိမရှိ, မည်သည့်ပလက်ဖောင်းကနေဖြစ်နိုင်သမျှပါလိမ့်မည်သည့်အတွက် log, တူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ရယူပါ။ မည်သည့်အခက်အခဲနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ကိုသင်အမြဲမှတ်ချက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကြှနျတျောတို့၏အခမဲ့ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုရုရှားမေးလ်သို့မဟုတ်အရေးအသားဆက်သွယ်နိုင်သည်။
https://termotools.com my.termotools.com © စာပို့ 2019